Kismaayo News » Jawaari oo kursiga lagu amaaneeyay
Jawaari oo kursiga lagu amaaneeyay
Kn:Gudoomiyaha golaha Shacabka, Prof. Jawaari waa sii wadaha xilka madaxweynaha inta uu madaxweyne Xasan Sh. Maxamuud dalka ku soo laabanayo, Kursiguna Jawaari waa ku amaano waana ka amaano.
Dalka waxaa ku sugan Golaha fulinta, gaar ahaan wasiirka koobaad, Ra’iisul wasaare Saacid Shirdoon. Ayadoo sidaasi ay tahay waxaa maanta caasimadda soo gaaray wafti ka socotay qaaradda Yurub, waxaana qaabilay sii haya kursiga madaxweynaha Prof. Jawaari ahna Gudoomiha Baarlamaanka.
Waftiga marka ay soo gaareen aqalka Madaxtooyada waxaa soo wada dhaweeyay Ra’iisul Wasaaraha, qaar kamid ah golaha wasiirada iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka laakiin waxaa si khaas ah u qaabilay Jawaari.
Lama garanayo ciyaaraha ka socda daaha gadaashiisa iyo qaabka ay u dhacayaan duufaanta dabaylaha ee ku xeeran Villa Somaliya, laakiin waxaa dibad yaal ah oon cidna ka qarsoonayn qaabka ihaaneynta ah ee loola dhaqmaayo wasiirka koobaad ee dalka iyo sida looga gardaduubay dhamaan shaqooyinkii qaranka ee uu gudan lahaa.
Waftiga Yurub ee maanta soo gaaray caasimadda, waa wafuuddii caalamiga ahayd ee ugu horaysay ee dalka timaada madaxweynaha oo dibadda ku maqan, waxaana qaabilay ku simaha madaxweynaha halka markii uu madaxweynaha dalka joogay aysan jirin cid aan asaga ahayn oo qaabila wafuudda dalka timaada taasi oo muujinaysay in xilalkii sare ee dalka uu madaxweynuhu isku darsaday marka laga reebo kan sharci dajinta oo golaha shacabku ay ka faro-maroojisteen. Haatan oo dalka uu ka maqanyahay wuxuu burhaantii ku wareejiyay oo amaano ooga dhigay Jawaari.